Bursa မှ Teleferik သတင်းများ RayHaber | raillynews
18 / 10 / 2012 အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, TELPHER
cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်း၏ Uludag ဟိုတယ်တိုးချဲ့နောက်ဆုံးတော့စတင်ခဲ့သည်။
မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe ပစ္စုပ္ပန် cable ကိုကားတစ်စီးခရီးသည်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရပ်တန့်ပါ, အဲဒီနောက်ပို့ဆောင်ပစ္စည်းဖျက်သိမ်းရေးတဲ့ကာလများအတွက်စနစ်သစ်ကြေညာခဲ့သည်။
Worksite အလျင်အမြန်တည်ထောင်ခဲ့သည်နှင့်စီမံကိန်းပြီးဆုံးအဖြစ်ပစ်မှတ်ထားသောအခါဇူလိုင်လ 2013 23 မိနစ်ဟိုတယ်တွင်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
အရင်းအမြစ်: www.olay.com.t ဖြစ်ပါသည်
Bursa ကနေ cable ကိုကားများနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်သတင်း
Bursa အတွက်Uludağ cable ကိုကားတစ်စီးမှအစ္စတန်ဘူလ်ကျေးဇူးတင်စကားထံမှ3နာရီကျသွားတယ်!
အသစ်ကေဘယ်လ်ကား 's Bursa Uludag ထံမှပိုမိုလျင်မြန်စွာ exit ပါလိမ့်မယ်
Bursa Uludag ထံမှပို့ဆောင်ရေး 20 မိနစ်အသစ်ကေဘယ်လ်ကား 's
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများဝယ်လိုအား Bursa ၏စက်မှုမြို့ပစ်မှတ်ထားလှုံ့ဆော်
တူရကီ, Bursa လမ်းရထားစီမံကိန်းအား မှစ. စာရင်းတစ်ခုကို item 66 နှင့်အတူကိုတုံ့ပြန်!
မတိုင်မှီ Bursa, Konya Silkworm ။
traffic Lock ကိုဖွင့်လှစ်5Bursa, တူရကီအတွက်စီမံကိန်းကနေပံ့ပိုးမှုထံမှ
Bursa မှ Bucharest သို့ဘတ်စကားနှင့်ရောမသို့ Bus
မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe
ရာစုနှစ်ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံး Tour ၏ဆွီဒင်ဗိသုကာပညာရှင်နှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများ Marmaray စီမံကိန်းကို
က "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာစီမံကိန်း" 72 ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာမှုများအတွက်အထောက်အပံ့တထောင်ပေါင် Bebka
cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူ Bursa အိုင်ကွန်, ယဉ်ကျေးမှုအကြားတစ်ဦးကတံတား
Bursa 49 နှစ်ပေါင်း ropeway အတွက် operating တစ်ဘက်စုံစောင့်ရှောက်မှု receiver
ရထားလမ်းသတင်းများ | ray သတင်းများ | ray လေလံ | ရထားလမ်းတူရကီ